I-Superb Villa enedama elifudumeleyo labucala - I-Airbnb
I-Superb Villa enedama elifudumeleyo labucala
Commune Rurale d'Issen, Taroudant, Morocco
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguTayeb
UTayeb unezimvo eziyi-34 zezinye iindawo.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uTayeb iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-villa enkulu yangoku kwindawo ekhuselekileyo ye-Orangeraie. Le paki yeehektare ezingama-28, ekwimizuzu engama-35 ukusuka eAgadir naseTaroudant kunye nemizuzu engama-30 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseAgadir, yindawo yoxolo phakathi kolwandle nentaba.
Iinkonzo ezininzi ziyafumaneka kuquka yokutyela, ukufaneleka phantsi kweliso eqinisekisiweyo ezemidlalo umqeqeshi, Hammam nendawo kunye nobuhle kunye iinwele, intenetya, swimming pool ye-250 m², dlala iindawo abantwana, emhlabeni uqeqesho Galufa, pétanque kunye inqwelo yegalufa ukuze ejikeleze ilali, singasathethi ke indawo yokupaka yasimahla nekhuselekileyo iiyure ezingama-24 ngosuku.
Ijikelezwe yimithi yeorenji kunye nothango lwezityalo, iivillas zibonelela ngomxube olungeleleneyo wobudlelwane obusondeleyo kunye nokunyaniseka kwindlela yokuphila yanamhlanje kunye neyaseYurophu.
Le villa yenziwe okulala amabini amakhulu, elinye luvula uye okulala, izindlu zangasese ezimbini, enkulu ukuyekelela kwigumbi lokuhlala anikwe TV smart kunye esofeni elula kwi neepali, a yaxhobisa ngokupheleleyo nekhitshi American kunye njengesicocisi, microwave Ioveni, isitovu, ifriji / ihood yesikhenkcisi kunye nomatshini wokuhlamba, igadi kunye nedama lokuqubha labucala. Uqhagamshelo lwe-intanethi ye-wifi luyafumaneka kuyo yonke ivilla.
Umbuki zindwendwe ngu- Tayeb